मेरो स्पर्धा हिरोइनसँग होइन हिरोसँग हो “रेखा थापा” | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← कतारको श्रम कानुन नेपाली भाषामा
KD 100 fine for eating in public →
९ वर्षो दौरानमा ८५ चलचित्रमा देखिने क्रममा यी २६ वर्षो सुन्दरीले अनेकौं विवाद र अवरोधको सामना पनि गरेकी छिन् । तर यसले केही फरक परेको छैन । उनी झन्झन् अगाडि आइरहेकी छिन् । पढौं, यिनै ग्ल्यामर क्विनको सनसनीपूर्ण र विचारोत्तेजक अन्तर्वार्ताः
हालखबर के छ ?
सुटिङ-सुटिङ-सुटिङ । यही साल पाँचवटा फिल्म सक्नु छ । आफूले बनाएको हिफाजत रिलिज गर्नु छ ।
यिसरी लगातार काम गर्दा क्वालिटी मेन्टेन हुन्छ र – मोनोटोनस हुँदैन ?
पहिला वर्षरिका फिल्ममा म नै हुन्थें, मोनोटोनस हुन सक्थ्यो । अहिले महिनाको एउटा गर्दा मेन्टेन हुन्छ । -चलचित्र साथी म त्रि्रोको सेटमा सामान्य थिइन् उनी)
अरू हिरोइन आएर भागबन्डा भएको हो ?
म धेरै फिल्म छोड्छु । कहीँ रोल मन पर्दैन, पारिश्रमिक, मिल्दैन त कहीँ हिरो ओरिएन्टेड फिल्म हुन्छ । अबको दिनमा म नारीप्रधान फिल्म खेल्न चाहन्छु । म स्टाब्लिस भैसकें, त्यसैले हिरोको वरिपरि नाच्न जरुरी छैन । शो पिस पहिला गर्थें, अब गर्दिनँ । सेन्टर क्यारेक्टर मात्र साइन गरिरहेकी छु ।
िफल्ममा अरूलाई छोडेर रेखा थापालाई किन ह्र्ने ?
मसँग चरित्रलाई न्याय गर्न सक्ने क्यापासिटी छ । स्टोरीको डिमान्ड छ भने सात तलाबाट हाम फाल्नेजस्तो हिरोइनले नगर्ने काम पनि म आपैm गर्छु -नाकका पोरा फुलाउँदै) मार्केटमा कसको डिमान्ड छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ ।
अरू नायिकाको डिमान्ड छैन भन्न खोज्नुभएको ?
अरूसँग कम्पेयर म कहिल्यै गर्दिनँ । गरे पनि हिरोइनसँग होइन, हिरोसँग कम्पेयर गर्छर्ुु हिजो जल -शाह) दिदी, निरुता -सिंह) दिदी, बिपना थापाको बेलामा आउँदा एक प्रकारको रेभुलेसन लिएर आएको हुँ । मसँगै अरू पनि आए । त्यो बेलामा शिरदेखि पाउसम्म छोपिएर सासूको कुटाइ, लोग्नेको हेपाइ खाने फिल्म बन्थ्यो । म फिल्ममा सासूलाई कुटेर आएँ । मार्केबल हिरोइन भएँ ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धी नै छैन त ?
छैन, मेरो प्रतिस्पर्धी कोही छैन, हिरोहरू हो र रेखा थापा नै हो ।
रेखा थापाको कमजोरी के हो ?
सपट हार्ट सबैलाई काम पनि गराइदिने तर तिनीहरूले नै टाउकोमा हानेर हिँडिराख्या हुन्छन् । -अलि गम्भीर हुँदै) चाहे त्यो हिरो होस् या हिरोइन, एक-दुइ जना हिरोइनलाई रिकमेन्ड पनि गर्थें । तर तिनीहरू नै प्रोड्युसरलाई रेखा थापालाई निकाल्नू भन्न पनि पछि पर्दैनन् । नारीको दुस्मन नारी नै हुँदो रहेछ । त्यस कारण मैले यी नारीको संगत गर्न पनि छोडिदिएँ । -खिसिक्क हाँसिन् उनी, चलचित्रमा अरूलाई व्यंग्य गर्नुपर्दा यसो गर्छिन् उनी) कस्तो भने नि विदुर दाइ, सायद उनीहरू मह होलान्, म मोबिल । मह र मोबिलको मिश्रण कहिले हुँदैन । मोबिलले गाडी कुद्ला, महको पनि विशेषता छ । म ग्रुपिज्म गर्ने, कुरा काट्ने, हिरोइनको घरघरमा बस्ने गर्दिनँ ।
रेखा थापा ग्ल्यामर र छोटो कपडाले चलेको हो ?
मेरो अनुहारै ग्ल्यामरस छ । -पहिले हाँसे पनि पछि कडा भइन् उनी) । छोटो लुगाले चल्ने भए त मभन्दा बढी छोटो लुगा लाएर, पूरै अंग देखाएर, ढाड देखाएर पनि आए । उनीहरू चल्नुपर्ने थियो । पछिल्लो समयमा निरुता दिले पनि छोटो लुगा लाकोथ्यो त । सञ्चिताले शासन फिल्ममा छोटै लुगा लगा’छ । चल्ने भए सबै चल्नुपथ्र्यो नि । -अलिकति सम्हालिँदै) रेखा कामले मात्र चलेको हो । काम राम्रो नभएको भए म उहिल्यै पलायन हुन्थें । मेरो पत्तासाफ गर्न हिरोहरू पनि लागेका थिए नि । आज तिनै हिरोहरूको मार्केट डाउन छ । तर म जहिले पनि सबैको भलो चाहने केटी, भगवान्मा विश्वास गर्थें र काममा आस्था राख्थें । त्यसैले कसैको केही लागेन ।
किसले गर्न खोज्यो पत्तासाफ ?
छन् नि, मलाई मात्र होइन, सबैको पेटमा लात हान्ने एक-दुइ जना हिरो छन् नि । -यसपटक आँखा पनि राताराता भए रेखाका) दुइ जना नभनौं, एकै जना छ । -खुलेर जवाफ मागियो, उनले टारिन्) जो व्यक्तिको नाम लिन लायक ठान्दिनँ, त्यसको नाम मेरो मुखबाट लिनु पनि अशुभ ठान्छु ।
िनर्माता-निर्देशकलाई हाई-हलो गर्न जानेका कारणले पनि फिल्म पाइरहेको हो ?
योचाहिँ एकदमै गलत कुरा हो -यो लाइन तीनपटक दोहोर्‍याइन् उनले) । आजसम्म रेखा फिल्मवाला कसैलाई पनि फोन गर्दिन, बरु मलाई फोन आउनर्ुपर्छ भन्ठान्छु । म आपै+m प्रोडक्सन खोलेर बसेको प्रोड्युसर मान्छे । मेरो ब्यानर रेखा फिल्म्सले पाँचांै फिल्म बनाइसक्यो । मैले आप\_mनै फिल्मलाई त टाइम दिन सकेको छैन भने रोल माग्न फोन गर्ने फुर्सद मसँग छैन । बरु पत्रकारहरूसँग मेरो मित्रता छ, सामीप्य छ । उनीहरूसँग बोल्दा दुइ-चार शब्द सिक्छु, बौद्धिकता बढ्छ । -अन्तर्वार्ताकारलाई हेरेर मुस्कुराउँदै) फिल्मवाला भनेको त घरको मान्छे, घरको मान्छेलाई किन फोन गरिराख्नुपर्‍यो १ काम परे बोलाउँछन् अनि गर्छु नत्र गर्दिनँ । चाकडीले चल्ने भए अरू सबै अगाडि हुन्थे, म पछाडि हुन्थे ।
तिपाईं एकदमै बाठी हो ? ’cause झरना थापाले अवार्ड पाइन् । भजन गाएर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग नाचेर, छोटो कदका १८ वर्षो खगेन्द्रसँग फोटो खिचाएर तपाईं चर्चामा आउनुभयो । झरना अवार्ड पाएर पनि छायामा परिन् ।
झरना दिसँग मेरो स्पर्धा छैन, उहाँ सिनियर हो । उहाँ आएको १९ वर्षभयो, म आएको ९ वर्ष । भजन मैले जबर्जस्ती गाएको होइन, म गायिका पनि हुँ । माओवादीले कार्यक्रममा बोलाए, गएँ, प्रचण्ड मसँग नाच्नुभयो । खगेन्द्रले चिन्ने राजेश हमाल र रेखा थापा मात्र रे १ हामीसँग भेट्न चाह्यो, भेट्यौं । रेखा थापाले गरेका हरेक कुरा न्युज बन्छन् भने त्यो मेरो प्रोब्लम होइन । -ओठ लेप्य्राएर हाँसिन् उनी, युद्ध जितेको भावमा)
कोही नायिका माथि आउन खोज्यो भने दोस्ती गर्ने र कमजोरी पत्ता लगाएर उसलाई पछाडि ठेल्ने गर्नुहुन्छ रे नि ? अरुणिमा लम्साल, ऋचा घिमिरे, रेजिना उप्रेती, सञ्चिता लुइँटेलहरूसँग पनि जुट्ने-टुट्ने भइरहन्छ । (सुनेका र देखेका कुरालाई जोडियो)
म उनीहरू टाइपको होइन, उनीहरू पनि म टाइपको होइन । न म कहिले अरुणिमा लम्सालसँग नजिक हुन खोज्या थिएँ । ऊ आपैm मसँग नजिक हुन खोज्या थियो । नरेश पौडेलको साथी भएकाले नरेशले सहयोग गरौं है भनेपछि मेरै लुगा दिएर फोटोसेसन गराइएको थियो । मैले जे लगाएँ, उसलाई पनि त्यही लुगा डिजाइन गराइदिएँ । रेजिनालाई कतिपय ठाउँमा लिनू भनेर रिफर गरिदिएँ । सन्देशबाट त अवार्ड नै पायो । भोजपुरीमा पनि आइटम सङका लागि रेजिनालाई भन्दिएँ । चलचित्र हिरोमा मलाई नै फाइनल नगरेका बेला ऋचालाई लिएर गएको छु । पूजना -प्रधान) ले त गाली पनि गर्‍यो आप\_mनै रोल फाइनल भएको छैन, अरूलाई किन रिफर गरेको भनेर । तर रोल म्याच भएन होला, ऋचालाई त्यसमा लिइएन । फेरि यस्तै रहेछ जिन्दगीमा रिफर गरिदिएँ तर नरेश पौडेलले अरुणिमा लम्साललाई लिइसकेको रहेछ । के थियो थाहा भएन । सञ्चिताहरूसँग त कहिले नजिकै होइन । तैपनि चट्टान, माया बसेछमा रिकमेन्ड गरिदिएको थिएँ । म शुभचिन्तक हो यिनीहरूको । तर मित्रता त्यो मान्छेसँग हुन्छ जोसँग तन, मन, व्यवहारले राम्रो होस् ।
रेखा थापाको कोही न कोहीसँग प्रोब्लम भइरहन्छ, किन ?
-निखिल उप्रेती, नरेश पौडेल, विराज भट्ट, राजेश हमालको उदाहरण दिँदै प्रश्न के गरिएको थियो, उनले आँखा राताराता पार्दै जवाफ फर्काइहालिन्) मेरो प्रोब्लम छैन । उनीहरू नै झगडा गर्न आउँछन् । निखिलको त म कुरै गर्न चाहन्नँ । निखिल, नरेशसँग मेरो प्रोब्लम होइन, उनीहरूको मसँग प्रोब्लम हो । बाँकी केटीहरूको जो कुरा छ, त्यसमा पनि त्यही नै हो । विराज त मैले ल्या’को, र्रि्रेक दिएको केटा हो, के प्रोब्लम हुनु ?
िनखिलसँगको प्रोब्लम के हो ? (दोहोर्‍याएपछि उनले मुख खोलिन्)
निखिल उप्रेतीलाई जहिले पनि मैले दाइका रूपमा हेरेको हो । उसको र मेरो एकदम राम्रो जोडी जमिरहेको थियो । त्यसैले हिम्मतमा लिएँ । अहिले उहाँले खै मलाई याद भएन भनेको सुनेको छु । हिम्मतमा उसले डेट नदिएर अल्झाइरहेर लफडा गर्‍यो । त्यस कारण निकालिदिएँ । -रेखा लगातार भनिरहेकी थिइन्) उसको ठाउँमा विराजलाई राखें, ऊ आज नम्बर वान हिरो छ । त्यही कुरामा झगडा भएको हो । अहिले विराज कहाँ छ निखिल कहाँ – मैले उसको प्रतिस्पर्धी जन्माइदें । ऊभन्दा राम्रो फाइट गर्ने, एक्टिङ गर्ने कलाकार जन्माइदिएँ । नेपालमा मात्र नभएर भोजपुरीमार्फत इन्डियामा पनि विराज हिट छ । विराज मात्र होइन, म पनि निखिलको प्रतिस्पर्धी हुँ । त्यसै पनि निखिल राम्रो कलाकार होइन, राम्रो स्टन्टम्यानचाहिँ हो । त्यो कुरालाई सल्युट गर्छु
िनखिलसँग अब कहिले फिल्म नखेल्ने ?
यो जन्म त के मानिसको सात जन्म हुन्छ रे, सातौं जन्मसम्म पनि म ऊसँग फिल्म खेल्दिनँ । -उनी रिसाएकी थिइन्) एउटा केटा मान्छे भएर आफूभन्दा सानो केटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने, त्यो लोग्नेमान्छे हो – घरि को हिरोइनलाई च्यापेर को हिरोइनको पेटमा लात हान्छ । मलाई त हरेक फिल्मबाट निकाल्न खोज्यो । मलाई के कन्र्फम थियो भने एक दिन ऊ आपैm पतन हुन्छ । आज मैले जन्माएको केटाले उसलाई जितिसक्यो । ओशोको किताब पढेर महात्मा बनिँदैन, व्यवहारमा लागू पनि गर्न सक्नुपर्छ नि ।
एउटा फिल्मको सुटिङमा राजेश हमालसँग फोटो खिचाउन पनि त मान्नुभएन नि ?
उहाँले कृष्टि मैनालीको टाउकोमा चिया घोप्ट्याइदिनुभयो रे, बिपना थापालाई लडाइदिनुभयो रे । हिरोमा काम गर्दा म १६ वर्षी केटी थिएँ । राजेश हमाललाई भगवान् मान्थें । त्यसको चक्कु-छुरी गीतमा नाच्दै थिएँ । फोटो खिच्दा छुनै मान्नुभएन । ए बाबँ, हामीचाहिँ मान्छे होइन – राजेश हमाल चन्द्रमाबाट झरेको त होइन नि । मैले उहाँबाटै सिकेको कुरा फर्काएको हो ।
छिवि ओझासँग बिहे गरेपछि ओझा हुनुपर्ने होइन र ? किन थापा ? (२० वर्षअन्तरको निर्मातासँगको वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेर प्रसंग फेरियो)
मैले भोलि बच्चा पाएँ भने पनि उसको थर थापा नै राख्छु । (उनले कपाल मिलाउँदै भनिन्) अब त झन् आमाको नामबाट पनि नागरिकता निस्कने भइसक्यो ।
तपाईं सामाजिक मान्यताविरुद्ध हो ?
-च्याप्ने कोसिस गरियो)
म गृहिणी हुन्थें भने घरमा लोग्नेका लागि भात पकाएर, जुत्ता पुछिदिएर, लुगा धोएर बस्थें । उसको कमाइमा खानुपथ्र्यो, इन्डिपेन्डेन्ट थिइनँ भने उसको थर राख्नुपथ्र्यो । तर मेरो आप\_mनै पहिचान छ, व्यक्तित्व छ भने त्यसको जरुरी छैन । बुबाआमाले जन्माएर र हर्ुकाएर दिएको थर बिहे गरेर चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने मान्दिनँ । बरु सबै केटीहरूलाई आह्वान गर्छर्ुुहामीले लोग्नेको होइन, लोग्नेले हाम्रो थर राखोस् न । जात केही होइन, रेखा भनेको धेरै होलान्, चिनाउने अर्को नाम मात्र थापा हो ।
तपाईंका तर्फबँट छविजीलाई ड्याडी नबनाइदिने ? (मरीमरी हाँसिन् रेखा)
बनाउने । पख्नोस् न, टाइम छ नि । उमेरै नपुगी बिहे गरियो, परिपक्व भएपछि ड्याडी पनि बनाइदिउँला, मम्मी पनि बनौंला । हतारै के छ र, साथीहरू त भर्खर बिहे गर्दै छन् ।
तिपाईं माओवादी हो – माओवादी कार्यक्रममा गएर प्रचण्डलाई नचाइदिनुभयो नि – -फेरि प्रसंग फेरियो, उनले हातसमेत हल्लाउँदै प्रतिवाद गरिन्)
होइन, म माओवादी होइन । त्योभन्दा अगाडि कांग्रेसको कार्यक्रममा पनि गएको थिएँ, कसैले केही भनेन । कलाकार मान्छे हुँ, जहाँ पनि जानुपर्छ नि । माओवादी बन्दको दिनमा माओवादीले घरमै गाडी पठाइदियो, माओवादीकै गाडी चढेर कार्यक्रममा गएँ । माओवादी किन – खाओवादी, साओवादी जसले राष्ट्रवादी एजेन्डा ल्याउँछ, त्यो सबै समारोहमा जान्छु । तर रात्रिभोज र चियापानमा कहिले पनि जान्नँ ।
प्रचण्डलाई पनि नचाइदिनुभयो हगि तपाईंले ?
मैले नचाएको होइन, उहाँ आपै नाच्नुभयो । राष्ट्रनायकसँग नाच्न पाउनु मेरो लागि पनि गौरवको कुरा हो । तियो कार्यक्रममा कि लाऊ माया मैतिर कि लाऊ उहीतिर, ए निर नलाऊ दुइतिर भन्ने जो गीत गाउनुभयो, त्यो आपै+mले छानेको हो – त्यो गीत सटाएर थियो कि सल्लाह ?
त्यो गीत मैले आपैmले छानेको हो । त्यो मेरो लागि उहाँहरूलाई सल्लाह थियो । मानिस ड्वयल हुनुहुँदैन, एउटा ट्य्राकमा हिँड्यो भने मात्र सफल हुन्छ, यता पनि उता पनि गर्‍यो भने हुँदैन भन्नका लागि त्यो गीत छानेको थिएँ । कि सरकारलाई साथ दिनुपर्‍यो कि आपmनै ट्य्राकमा हिँड्नुपर्‍यो भन्न खोजेकी हुँ ।
तियसलाई हेरेर एमाले नेता केपी शर्माले पहिला संविधान बनाऊँ अनि रेखासँग नाचौंला भन्नुभयो नि ?
उहाँको कुरा मलाई मन पर्‍यो । त्यो उहाँको दृष्टिकोण हो । संविधान बनेपछि नाच्न झन् राम्रो हुन्छ । संविधान बनेपछि उहाँसँग नाचौंला नि । (खितखिताइन् रेखा)
नायिकाको सेक्सभिडियो आउन थालेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ- (जल्दोबल्दो विषय)आपनो इन्टे्रस्टको कुरा हो । तर एउटा-दुइटा फिल्म खेल्छन् अनि यस्तो भिडियो आउँदा सिंगो इन्डस्ट्री नै बदनाम भयो । सबै नायिकालाई हेर्ने नजर अर्को भयो । सबै नायिकाको भिडियो छ भन्ने कुरा आयो । सबै नायिका यस्तै हुन्छन् भन्ने पर्‍यो । यसले राम्रो गरेन । इन्डस्ट्री एक्कासि बदनाम हुँदा दुःख लाग्यो ।
गिल्यामर रोलबाट वाक्क भएको हो ? अब इमेज चेन्ज गर्न खोज्या हो ? उनले लगाएको कुर्तासुरुवाललाई ध्यानमा राखेर सोधियो)
वाक्कभन्दा पनि इमेज चेन्ज गरौं भन्ने लागेको छ । म बाँचेसम्म ग्ल्यामरस हुन्छु, ५० वर्षा पनि छोटै लुगा लाउँछु । ट्य्राक चेन्ज गर्ने सोचचाहिँ छ ।